China Customized Plastic Led Driver Enclosure - Mpanamboatra - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Home >Products >Fitaovana jiro plastika>Fanakatonana mpamily plastika
18W na 24W boribory natsofoka plastika fitambaran'ny mpamily
FAQ: 1. Manana orinasa misy anao ve ianao? Eny, mpanamboatra ao Shina izahay mandritra ny 10 taona mahery. Ny orinasa misy anay dia any amin'ny faritanin'i Guangdong.2. Ahoana no ahafahako mitsidika ny orinasa misy anao? Pls ampahafantaro anay anay mialoha raha mikasa ny hitsidika ianao. Azonay atao ny manoro anao ny lalana na mandray anao eny amin'ny gara na amin'ny seranam-piara-manidina.3. Manolotra santionany maimaimpoana ve ianao? Tsy olana izany, afaka mandefa ny santionany maimaimpoana ho an'ny fanovozan-kevitra izahay.
36W fametahana familiana fiara fitaterana plastika abs
60W fametahana familiana fiara fitaterana plastika abs